ဝါနု - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤ ဆောင်းပါးသည် မည်သည့် ကျမ်းညွှန်း (သို့) အကိုးအကား ကိုမှ ရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိပေ။ ကျေးဇူးပြုပြီး စိတ်ချယုံကြည်နိုင်လောက်သော အချက်အလက်ရင်းမြစ် များကို ကိုးကားရည်ညွှန်း၍ ဤဆောင်းပါးကို မွမ်းမံ ပေးပါ။ အကိုးအကားမပါသော အချက်အလက်များသည် စောဒကတက်ခြင်းခံရနိုင်ပြီး ဖယ်ရှားခြင်းပါခံရမည်ဖြစ်သည်။ (နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀)
ဝါနု သည် စာရေးဆရာနှင့် အမြင်ဆိုင်ရာ အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။  ဖခင်ဖြစ်သူမှာ စာရေးဆရာ၊ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ မောင်ဝဏ္ဏ ဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူမှာ ဒေါ်ချိုချိုရီ ဖြစ်သည်။ အဖိုးဖြစ်သူမှာ စာရေးဆရာ၊ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ သာဓု ဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာ၊ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ သုမောင်၊ စာရေးဆရာ မင်းလူနှင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ရူပတို့သည် ဖခင်ဘက်မှ တော်စပ်သည် ဘထွေးများဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာ၊ အယ်ဒီတာ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အောင်ပြည့်သည် မိခင်ဘက်မှ တော်စပ်သော ဦးကြီး ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ပြေဇင်နှင့် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ဥက္ကာတို့သည် မွေးချင်း မောင်များဖြစ်သည်။
ဝါနုကို ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားသည်။ အခြေခံပညာအထက်တန်း အောင်မြင်သောအခါ ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဂီတပညာအထူးပြုဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့သည်။
ဂီတပညာ အထူးပြုဖြင့် ဘွဲ့ရခဲ့သော်လည်း အမြင်ဆိုင်ရာအနုပညာသည်တစ်ဦးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ စာရေးဆရာမတစ်ဦးအဖြစ်လည်းကောင်း အနုပညာသည်ဘဝကို ဖြတ်သန်းလျက်ရှိသည်။ အနုပညာလက်ရာများမှာ ပန်းချီများနှင့် ဗီဒီယိုအနုပညာများဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံး တစ်ဦးတည်းအနုပညာပြပွဲကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 
အနုပညာသည်တစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည့် ထွန်းဝင်းအောင်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သားသမီး ၂ ဦးထွန်းကားခါ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
↑ Myanmar art gaining purchase။
↑ Myanmar’s artistic palette။
↑ Wah Nu Archived 2010-03-12 at the Wayback Machine., Art-U room.
↑ 3rd Fukuoka Triennale 2005 Archived4March 2016 at the Wayback Machine., Fukuoka, Japan, 2005.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝါနု&oldid=638398" မှ ရယူရန်
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ မှ အကိုးအကား မပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၂၂:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။